မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး မှ ဥက္ကဌပြောင်းလည်း ခြင်း နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ အာဏာရှင်လက်အောက်က အဖွဲ့အစည်း နဲ့ အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ သင်းသင်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး မှ ဥက္ကဌပြောင်းလည်း ခြင်း နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ အာဏာရှင်လက်အောက်က အဖွဲ့အစည်း နဲ့ အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ သင်းသင်း
ဥက္ကဌအသစ်ခန့်စည်သူကို ကြိုဆိုတဲ့အနေ နဲ့ မော်ဒယ်သင်းသင်း မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်းရေး တဲ့စာ…ဒီလောကမှာ နှိမ့်ခဲ့သူတွေ ရှိတယ် ရုပ်ရှင်လောက ထဲကို သင်းကိုခေါ်မသွင်းချင်သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့အမုန်းခံအတိုက်ခံလုပ်ပြီး
အများထောက်ခံပေးလို့ အစည်းရုံးကဒ်ပြားလေး ကိုင်ခွင့်ရ ခဲ့ပါတယ် ဘယ်တော့မှလဲ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဝင်အဖြစ်မှ မိမိသဘော ဆန္ဒအလျောက်ယနေ့မှစ၍ နှုတ်ထွက်ပါသည်ရှင့်” အစည်းအရုံး ဥက္ကဌမည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်ခြင်းနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ
အာဏာရှင်များ၏ လက်အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းသော မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ မပတ်သက်ခြင်းပါ ဒါကြောင့် ၄ လပိုင်းက တိုင်းသီချင်းဆို photo ရိုက် fb ကြော်ငြာတွေ အငှားတွေသင်းမလိုက် ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ဆိုပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။.
ဥကၠဌအသစ္ခန႔္စည္သူကို ႀကိဳဆိုတဲ့အေန နဲ႔ ေမာ္ဒယ္သင္းသင္း မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းေရး တဲ့စာ…ဒီေလာကမွာ ႏွိမ့္ခဲ့သူေတြ ရွိတယ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ထဲကို သင္းကိုေခၚမသြင္းခ်င္သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမဲ့အမုန္းခံအတိုက္ခံလုပ္ၿပီး
အမ်ားေထာက္ခံေပးလို႔ အစည္း႐ုံးကဒ္ျပားေလး ကိုင္ခြင့္ရ ခဲ့ပါတယ္ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ေက်းဇူးမေမ့ပါဘူး ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဝင္အျဖစ္မွ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ယေန႔မွစ၍ ႏႈတ္ထြက္ပါသည္ရွင့္” အစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌမည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လုံးဝမသက္ဆိုင္ပါ
အာဏာရွင္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ဖြဲ႕စည္းေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မွ် မပတ္သက္ျခင္းပါ ဒါေၾကာင့္ ၄ လပိုင္းက တိုင္းသီခ်င္းဆို photo ႐ိုက္ fb ေၾကာ္ျငာေတြ အငွားေတြသင္းမလိုက္ ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး ဆိုၿပီးေရးသားခဲ့ပါတယ္။.
Previous post ကျစ်လစ် တောင့် တင်း တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ကို ပြသ လိုက် တဲ့ ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ အမိုက်စား VIDEO
Next post ဆက်ဆီ ဆန် ဆန် မျက်နှာလေး နဲ့ အသည်း ယားစရာ ကောင်းနေ တဲ့ နန်းမွေစံ (ဗီဒီယို)